Zimbabwe General Chiwenga Spits Fire, Warns Against More Zanu PF Purges – Report Focus
Zimbabwe’s powerful but often silent top military leadership has weighed in on the shake ups in the ruling Zanu-PF party that resulted in the expulsion of Vice President Emmerson Mnangagwa, last week.
The Commander of Zimbabwe’s Defence Forces, General Constantine Chiwenga, on Monday warned that “the military will not hesitate to step in,” if the purges against former liberation war fighters continue.
In a written statement that appeared to target the group reportedly led by First Lady Grace Mugabe, Professor Jonathan Moyo and several others who go by the name Generation 40 or G40, that are reportedly behind the expulsions in the party, Chiwenga said “it was saddening to see our revolution being hijacked by agents of our erstwhile enemies who are now at the brink of returning our country to foreign domination against which so many of our people perished.”
Chiwenga attacked the lack of development in the country due to the “squabbling within the ranks of Zanu-PF,” which he said was being spearheaded by people who did not participate in the revolution that brought independence to Zimbabwe.
Zanu PfzimbabweZimbabwe Army